राजनीति | BARDIYA ONLINE |
वि.सं. बुधबार, माघ ८, २०७६ तदनुसार 22 January 2020
हिन्दुधर्मका लागि जनमत संग्रह हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको छैन : शसांक कोईराला
गुलरिया (बर्दिया) । कांग्रेसका महामन्त्री शसांक कोइरालाले हिन्दु धर्मका लागि जनमत संग्रह हुनुपर्ने अभिव्यक्ति नदिएको बताएका छन् । प्रेस युनियन गुलरिया, बर्दियाले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कोईरालाले कांग्रेस स्वतन्त्र धर्मको पक्षमा रहेको समेत बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै कोईरालाले धर्म निरपेक्षता राख्ने कि नराख्ने जनमत संग्रहको कुरा भनेको छैन, [पूरा पढ्नुहोस्]
बर्दियाली सांसदको प्रश्न : कण्डम निःशुल्क हुने तर महिलाको प्याड किन नहुने ?
काठमाडौं । बर्दियाली सांसद विमला वि.क.ले महिलाहरु महिनावारी भएका बेला प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्नु पर्ने बताएकी छन् । उनले कण्डम निःशुल्क वितरण गर्ने प्रचलन भए पनि प्याड किन निःशुल्क नभएको भनी प्रश्न समेत गरिन् । बुधबार संसदमा छाउपडी प्रथा अन्त्य सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल गर्दै उनले भनिन् ‘म सानो कुरा भन्न चाहन्छु समाभुख ज्यू, [पूरा पढ्नुहोस्]
टीकापुर घटनामा सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद
कैलाली । जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै संघीय सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलाशले २०७२ भाद्र ७ गते टीकापुरमा ९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा सांसद रेशमलाल चौधरी सहित ११ जनालाई २०–२० वर्ष कैद गर्ने फैसला गरेको हो । अदालतले रेशमलाल सहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, [पूरा पढ्नुहोस्]
काठमाडौं। कारागारमा रहेका रेशम चौधरीले बिहीबार सांसदको सपथ ग्रहण गर्ने भएका छन् । कैलालीको टीकापुरमा आठजनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोगमा कारागारमा रहेका चौधरीलाई बिहीबार सभामुख कृष्णबहादुर महराले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने संसद सचिवालयले जनाएको छ । बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारमा रहेको सभामुखको कार्यकक्षमा चौधरीलाई सपथ गराइने सभामुखका [पूरा पढ्नुहोस्]
दुई तिहाइको सरकार छ प्रधानमन्त्री किन डराउनुभा’छ? : कोईराला
गुलरिया/ बर्दिया नेपाली कांगे्रसका नेता शेखर कोइरालाले नेपाली जनता,डा. केसी र सरकार तिनै पक्षको चित्त बुझाएर नँया ढंगले अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन । प्रेस यूनियन बर्दियाले सदरमुकाम गुलरियामा मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कोईरालाले सत्याग्रहीको जीवन मरणको अवस्थामा सरकारले गैरजिम्मेवारी पन देखाएको बताए । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हुबह कार्यान्वयन हुनु पर्छ [पूरा पढ्नुहोस्]
राजापुरको कर्णाली घाटमा सुन खोज्नेहरुको कथा (भिडियो कथा)
काठमाण्डौ । कर्णाली नदीको किनारामा पर्ने बर्दियाको राजापुरमा एउटा चिटिक्कको गाउँ छ । यो गाउँमा बस्ने सोनाह समुदायका महिला र केटाकेटी बालुवामा सुन खोजेर गुजारा चलाउँछन् । फुर्सद हुने बित्तिकै उनीहरु बालुवा पखाल्ने आवश्यक सरसामान बोकेर नदीको बगर जान्छन् । सुनका कण कहाँ हुन्छ भनेर पत्ता लगाउँछन् र खनीखोस्री गर्छन् । यसरी खोस्रेको बालुवालाई विशेष प्रकारको काठको भाँडामा [पूरा पढ्नुहोस्]
जनताले चाहेमा बहुमतले संविधान फेरबदल गर्न सकिन्छ : नेपाल
भगतराम थारु/नेपालगञ्ज। नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता तथा पुर्ब प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी छिट्टै एकिकरण हुने बताएका छन । प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपाल बाँकेको सयुक्त आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालले पार्टी एकिकरण पछि देशमा विकासले ठुलो फड्को मार्ने पनि बताएका छन । पेरिस डाँडा या बल्खु [पूरा पढ्नुहोस्]
भुरिगाउँ, बर्दिया । बर्दियाको भुरिगाउँ बजारबाट सदरमुकाम गुलरीया जाने हुलाकी सडक अन्तर्गतको झण्डै ८ किलोमिटर दक्षिणतर्फ शाहीपुर पुगेपछी मुक्तकमैया बस्ती पुगिन्छ । यही बस्तीको बनफोरुवा फाँटमा लौटी थारुको घर छ । लौटी थारु मुक्तकमैया अगुवा तथा समानुपातिक प्रदेश सांसद हुन । ठाकुरबाबा नगरपालिका शाहीपुरमा लौटी थारुको मुक्तकमैयाबाट पाएको तीन कठ्ठा मात्र जमिन छ । इट्टाको दिवाल, [पूरा पढ्नुहोस्]
दाङ। प्रदेश राजधानीको माग राख्दै पाँच दिन देखी गरिएको दाङ बन्द फिर्ता भएको छ । निरन्तरको बन्दले जनजिवन प्रभावित भएको भन्दै आन्दोलनकारीले दाङ बन्द फिर्ता गरेका हुन् । शनिबार राती ११ बजेदेखी आमहड्ताल स्थगित हुने भएको हो । आन्दोलनकारीले रचनात्मक तरिकाले आफ्नो मागलाई निरन्तरता दिने पनि बताएका छन [पूरा पढ्नुहोस्]
वामदेव आफ्नै क्षेत्रमा हार्नुको कारण पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन
गुलरिया,बर्दिया । बर्दिया प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं- १ मा उम्मेद्बारी दिएका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम आफ्नै क्षेत्रमा थोरै मतान्तरले पराजित हुनुको कारण पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरिएको छ । एमाले अध्यक्ष हरिप्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा क्षेत्र १ माओवादी केन्द्रका नेता भवनकुमार थारू पनि छन् । समितिले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन [पूरा पढ्नुहोस्]